Ukuze ngokuphelele ujabule, kudingeka wenze, hhayi ubumfihlo ezinhle kuphela, kodwa futhi umsebenzi wakhe. Indlela uzithola? Akekho uyonika algorithm ecacile yezenzo, singakwazi kuphela zama ukunikeza iseluleko esithile.
Indlela zizithole kule mkhakha? , Udinga ukunquma ukuphendula lo mbuzo - ngubani ofuna ukuba yiyo. Uma namanje kulesi simo asikukholwa kubalulekile ukucabanga mayelana - nokuthi yini ziyakujabulela ukwenza kakhulu wukuthi niyajabula ngalokho okufunayo? Uma ezingeni kanye lezemfundo leliphupho akwanele, umgomo oyinhloko futhi uzothola it.
Uma umuntu behileleke nakwezamabhizinisi engathandwa, angebe wanelisekile. Iyoba yini ukucasulwa nozakwethu enqubeni umsebenzi, bese abathandekayo, futhi zizihloniphe nazo ngokwazo. Ngenxa yalokho - ukucindezeleka, ukudangala. Ngakho ukukhula umsebenzi ngeke.
Indlela bazithola? Qala ukusebenza lapho ufuna! Uma uthanda mkhakha, umsebenzi uqobo, khona-ke ungaba ace. Asikho isidingo ubuvila, zama ukuqonda zonke umehluko wemisindo nemiqondo yamagama. Ukukhuthazela njalo unikeza izithelo. Uma bayazigqaja ke uzithola emsebenzini nasekuphileni.
Kodwa, ngeshwa, abaningi bethu musa ukuphila impilo ukuthi ukuphupha ngani. umsebenzi Asebenza, uhambo esitolo, ukuphila inzondo ... isithombe alithandeki ka usuku lonke ekuphileni. Lokhu kusho ukuthi into iphelelwe isilawuli sakho. Sekuyisikhathi ukushintsha futhi ukushintsha ukuphila emzungezile.
Ungase ubuze: "Indlela bazithola umsebenzi, uwuchaza kanjani endaweni yayo kuleli zwe?" Kuyinto kuyisikhathi sokuba iqale ucinge main - umsebenzi kanye nomsebenzi nokuphila. Wonke umuntu izintandokazi zabo. Umuntu othile ufuna ukuhola, futhi othile - ukulalela. Likuphi ke - umsebenzi iphupho?
Ungesabi ukuba ukuxhuma inqubo lokuzibusa abangane babo kanye nezihlobo. Hamba futhi bajwayelane abameleli ubuchwepheshe ezahlukene, ukufunda ngazo, ubuke ama-movie. Dlula izifundo zokuqeqesha (okuyinto, phakathi kokunye, ehlukahlukene ukuphila kwakho), ujoyine amakilabhu, ube umsebenzisi okhuthele izinkundla okhokhelwayo. Funda, uthole umdlalo, phela. Lokhu kuzokusiza ukuba ngibe umuntu ezithakazelisayo nomngane. Zama ukubheka konke ngemehlo abanye abantu.
Ungakhohlwa ukuthi kukhona ukuhlolwa kwengqondo ukuthi kuzosiza sithole okuthandayo. Ziqhutshwa izikhungo ukwelulekwa kanye izikhungo umsebenzi. A ukuhlolwa ethandwa ungakwazi kudlule bebodwa! Imiphumela zokuxilonga ingase ikumangaze. Ungase uthole ukuthi umgwaqo lwakho professional - isitshalo kunokuba Ihluzo Elingafaki Ukuqoka!
Zonke ubuchwepheshe ezidingekayo, umsebenti ibalulekile. Ungakhethi imfashini mkhuba. Ukusebenza ngamaphayiphu - akusiyo ehlonishwayo, kodwa inzuzo kakhulu. Indlela bazithola i umsebenzi engathandwa iningi? Kakhulu nje - Ngiyakuthanda umsebenzi wami!
Akukhona njalo isithombe kuhle - ke luwumgogodla umsebenzi. Ngokwesibonelo, nenhle esiqinile ukuphathwa umsebenzi kusukela ekuseni kuze kuhlwe ngaphandle ngezimpelasonto namaholidi. Kungazelelwe, ungenawo bakwazi? Mhlawumbe indawo engcono kuwe - kungcono umpheme? Musa ulahle ngisho imibono okungenangqondo kakhulu futhi ngendlela yokusangana.
Ebuntwaneni iphupho kuyohlale kuyiphupho Nokho. Indlela azithola ekulesi ukuphila omdala kuxhomeke kuwe.
Indlela ukubhala iphepha ezinhle eside?
Abaqondisi kulenkhulu isikhathi sethu - ayini?